बच्चाले पनि बुझ्ने गरी #ParadisePapers लिकको व्याख्या : खासमा यो के हो? – MySansar
बच्चाले पनि बुझ्ने गरी #ParadisePapers लिकको व्याख्या : खासमा यो के हो?
Posted on November 7, 2017 by Salokya
अहिले विश्वभर हङ्गामा भइरहेको ‘प्याराडाइज पेपर्स’ लिक के हो? रेड्डिटका एक प्रयोगकर्ता DanGliesack ले यसअघि पानामा पेपर्स सार्वजनिक हुँदा पाँच वर्षको बच्चाले पनि बुझ्ने गरी यो जटिल विषयको एउटा व्याख्या गरेका थिए, जसलाई मूलधारे मिडियाले समेत साभार गरे। उनकै व्याख्यालाई नेपाली परिवेशमा ढालेर भावानुवाद गरेको छु, शायद् यसले सजिलोसँग बुझाउन मद्दत गर्छ कि-
अहिले वास्तविक जीवनमा धेरै धनी र शक्तिकाली व्यक्तिहरु श्यामबहादुरको घरमा खुत्रुके लुकाएको अवस्थामा पक्रिएका हुन्। अहिले ती सबैका आमाले थाहा पाएका हुन्। अब छिट्टै नै कसले राम्रो उद्देश्यले र कसले नराम्रो उद्देश्यले खुत्रुके राखेका हुन् भन्ने थाहा हुनेछ। पत्रकारहरु त्यही गरिरहेका छन्। तर सबैजना समस्यामा भने परेका छन् किनभने उद्देश्य जेसुकै भए पनि त्यसरी गोप्य राख्न पाइन्न थियो।
अफसोर बैँकिङबारे सजिलो बुझाउन गरिएको यो व्याख्या तपाईँले बुझ्नुभयो नि?
अब प्याराडाइज पेपर्सबारे केही बुझौँ।
प्याराडाइज पेपर्स भनेको एक करोड ३४ लाख गोप्य इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट हो जुन अफशोर लगानीसित सम्बन्धित छ। यो जर्मन पत्रिकाले लिकका रुपमा पाएको थियो र आइसिआइजेको सहकार्यमा विश्वका विभिन्न मिडिया लागेर ५ नोभेम्बर २०१७ मा सार्वजनिक गर्न थालिएको हो। यी डकुमेन्टहरु अफशोर ल फर्म एप्पलबाइ, कर्पोरेट सर्भिस प्रोभाइडरहरु एस्टेरा र एसियासिटी ट्र्स्टसँग सम्बन्धित छन्। १ लाख २० हजारको नाम यसमा छ।
नेपालीको नाम छ? यो लिक नेपाली मिडियाले नपाएको हुनाले नेपालीको नाम अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका छैनन्। तर पनामा पेपर्स र यसअघिका लिकहरुमा पनि नेपालीको नाम रहेकोले यसमा पनि नेपालीको नाम रहेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। पूरा डकुमेन्ट लिक नभएसम्म त्यो अहिले थाहा पाउन मुश्किल नै छ।